सडक पुगेपछि मृदुङ्गा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो (फोटोफिचर सहित) « Mechipost.com
सडक पुगेपछि मृदुङ्गा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो (फोटोफिचर सहित)
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०७७, आईतवार १६:३२
पाँचथर, १८ साउन
नजिकै सडक पुगेपछि पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको मृदुङ्गा झरना आन्तरिक पर्यटकहरुको रोजाईमा परेको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पहुँच मार्ग र तमोर कोरिडोर सडक झरना नजिकै पुगेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरुको भीडभाड हुन थालेको हो । यो झरना हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ को सीमानामा रहेको छ । ठूल्ठुला चट्टानका वीचबाट झरेको झरना निकै आकर्षक र सुन्दर देखिनाले यहाँ पर्यटकको भीड लाग्न थालेको हो ।
मेची राजमार्गबाट हिलिहाङ–१ भालुचोक र फेदापाबाट करीब एक घण्टा यात्रा गरेपछि यो झरनासम्म पुग्न सकिन्छ । सबै प्रकारका सवारीका साधन यहाँसम्म पुग्न सक्ने भएकाले आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप दिनानुदिन बढिरहेको स्थानीय ब्यवसायी सुरेश चापागार्इँले वताउनुभयो ।
चापागार्इँका अनुसार सडक पुगेपछि झरनामा तस्वीर लिने र सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने क्रमले यो झरना प्रचार आएको हो । “बाटोकै कारणले ओझेलमा रहेको झरना पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास भएको छ”, चापागाईँले भन्नुभयो, “यहाँ पाँचथर सहित विभिन्न जिल्लाका मानिसहरुको दैनिक रुपमा भीडभाड हुने गरेको छ ।”
सडकले विकास र समृद्धिका अन्य आयामहरु समेत खोल्दछ भन्ने बलियो उदाहरण बनेको छ यो झरना । यहाँ अहिले दैनिक न्यूनतम २५० जनाभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको ब्यवसायी चापागाईँको भनाई छ । झरनाको २०० मिटर नजिकबाट तमोर कोरिडोर सडक विस्तार भएको छ ।
हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद शिगूका अनुसार झरनालाई ब्यवस्थित पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न लागिएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा उक्त झरनालाई प्राकृतिक रुपमै सुन्दर बनाउने प्रयास गरिने उहाँको भनाई छ । सडक छेउ सवारी पार्किङ स्थल, सिंढी मार्ग, स्वीमिङ पुल लगायत संरचना अत्यावाश्यक भएकाले ती संरचना निर्माणका कार्य समेत थालिने वडाध्यक्ष शिगूले वताउनुभयो ।
यहाँ घुम्न पुग्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश कमिटी सदस्य हर्कबहादुर नेम्वाङ मृदुङ्गा झरना पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले महत्वपूर्ण भएपनि पूर्वाधारका दृष्टिले शून्य अवस्थामा रहेकाले द्रूत गतिमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको वताउनुहुन्छ ।
“यहाँ पर्यटकहरुको भीड नै लाग्ने गरेको देखियो । पर्यटन प्रवद्र्धनबाट यहाँ ठूलो लाभ पनि लिन सकिने रहेछ”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।”
झरना निकै सुन्दर र आकर्षक रहेको तथा तमोर कोरिडोर सडक सञ्चालनमा आउन लागेकाले यहाँबाट स्थानीय तहले ठूलो आम्दानी लिनसक्ने नेम्वाङको भनाई छ । “पूर्वाधार निर्माण र ब्यवस्थित प्रचार गर्न सके यहाँबाट सरकारले ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्दछ”, नेम्वाङले भन्नुभयो ।
फिदिम र ताप्लेजुङबाट यहाँ पुग्न लामो समय नलाग्ने हुनाले स्थानीय पर्यटकहरुको चाप बढ्दै गएको हो । स्थानीयवासी एवम् ब्यवसायी चापागाईँका अनुसार यहाँ हिउँदमा पानी कम हुने गर्छ । हिउँदमा समेत पानी हुने सुभाङ खोला झरना नजिकै रहेकाले उक्त पानीलाई झरनाबाट झार्ने प्रयास गरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै झरनाभन्दा माथि रहेको मन्दिरको जिर्णोद्वार गरिनुपर्ने, आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाइनुपर्ने स्थानीयवासी खगेन्द्र योङहाङको माग छ । हिलिहाङ गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त झरनालाई पर्यटकीय हव तथा मनोरञ्जन स्थलमा परिणत गर्न गुरु योजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।